Google Lens dia manomboka mahatratra telefaona Android mifanentana | Androidsis
Efa elaela izay ny vaovao rehetra fa handao antsika Google Lens dia natolotra avokoa. Anisan'izy ireo no ahitantsika ny fiasa toy ny fanekena zavatra tena izy. Fampandrenesana mampanantena izay irian'ny mpampiasa Android hampiasan'izy ireo. Na dia elaela aza izany. Saingy toa manomboka manatratra finday mifanentana izy ireo.
Satria Google Lens dia manitatra be lavitra kokoa. Ka ny telefaona mifanentana dia afaka mankafy mandritra ny andro vitsivitsy, raha mbola tsy misy, ny sasany amin'ireo fiasa vaovao ho avy. Na dia toa tsy ho eo aza ny fotoana rehetra.
Tonga amin'ny fomba mihoampampana ny fanavaozana ny Google Lens. Tamin'ny voalohany, nahatratra maodely manokana ny fiasa sasany, saingy tsy fantatra mazava hoe iza amin'ireo telefaona na firy no hahazo ireo vaovao rehetra ireo. Ary farany, toa vao mainka manitatra zavatra hafa izy ireo.
Satria ny fanitarana ny Google Lens dia efa tena izy ary mahatratra fitaovana maro kokoaKa raha manohana an'io endri-javatra io ny findainao dia tokony hampandre anao vetivety ny Google Assistant. Vetivety dia hanana ny fomba ahafahanao mandrindra ny Lens amin'ny telefaona Android anao. Hiseho eo amin'ny zoro ambany ankavanan'ny mpamosavy ny kisary iray hanampiana anao amin'izany.
Na dia toy ny mahazatra amin'ny fanavaozana ny orinasa dia mbola tsy tonga tany Espana izy io. Mety mbola mila andro vitsivitsy vao tonga amin'ny fomba ofisialy eto amintsika. Farafaharatsiny raha jerentsika ny hafainganan'ny fanavaozana ny marika mahazatra. Saingy efa mahatratra tsena marobe izy io. Ka efa fantatsika fa ofisialy.
Ity fanitarana ity dia mety hanampy ny Google Lens hanana fanatrehana bebe kokoa. Satria izy io dia iray amin'ireo tetikasa mahaliana indrindra amin'ny marika, saingy mbola tsy novolavolaina na nanan-danja tokony hananana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Google Lens dia manitatra amin'ireo telefaona Android tohana rehetra
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition: famaritana sy toetra mampiavaka ny farany avo lenta amin'ny orinasa